Su'aalaha Wareysiga - Jawaabaha | Xirfadaha Cyber-Security ITS
Su'aalaha Wareysiga - Jawaabaha loogu talogalay Xirfadaha Cyber-Security
Innovation ayaa si deg-deg ah u socota, khatarta amniga ee internetka ayaa u muuqda mid aad u adag in la aqoonsado. Qalabka cybercriminal casriga ah ee hawlgalku, habka caadiga ah ee khatarta khatarta ah marnaba ma noqonin kuwo qasab ah. Sidaas daraadeed, khubarada amniga internetka ayaa lagu kalsoon yahay si kor loogu qaado awooddooda kartidooda si joogto ah sida xaaladda amniga ee isbeddelka. Waxay bixiyaan la-talin iyo taageero gaar ah si ay macaamiisha uga caawiyaan inay sii wataan shaqadooda Amniga iyo Halista. Waa kuwan su'aalo dhowr ah:
20 Su'aalo iyo Jawaabo Wareysiyo loogu talagalay Xirfadaha Cyber-Security
Maxaad ku haysaa nidaamka gurigaaga?
Waa maxay "duritaanka SQL"?
Waa maxay xidhiidhka SSL iyo casharka SSL?
Maxay yihiin saddex waji oo lagu xaqiijinayo nin?
Nidaamka kala duwan ee baaritaanka amniga?
Maxay yihiin dayacaadaha server-ka ee webka?
Waa maxay Traceroute ama raadiyaha?
Nabadgelyada cirifka Linux: Saddex marxaladood oo lagu hubinayo nidaam kasta
Waa maxay salting iyo waxa loo isticmaalo?
Qaybta loo adeegsaday qayb ka mid ah SSL?
Waa maxay WEP cracking?
Qodobbada qeexaya xaaladda gobolka SSL?
Sidee ayaad u sugi laheyd gurigaaga Gaariga Haqaboolka?
Maxay yihiin sifooyinka baaritaanka amniga?
Maxay tahay baaritaanka dekadda?
Waa maxay kaluumeysiga?
Nidaamka Nidaamka Qalabka Dabeecadda ee Nidaamka Nidaamyada (NDIS)?
Waa maxay HIDS?
PC Windows la qaadi karo oo leh farriin aan fogeyn, taleefanka sida ugu macquulsan ilaa 14 Linux Workstations, Active Directory Domain Controller, ayaa bixiyay qalabka loo yaqaan "Firewall" iyo "netster-net".
Mashruucan aad soo ururisay ayaad oran lahayd inaad ku faraxsan tahay?
Iyadoo aan loo eegin haddii mashruucaagu yahay mid shakhsiyan ah munaasabada kowaad markaad wax ka bedesho amarro amaba aad soo ururisay PC-gaaga koowaad ama aad muhiim u ah barnaamijka barnaamijka, ujeeddada su'aashan waa in lagu muujiyo xiisa-jarkaaga. Tani waxa ay wax ka baratay amniga internetka.
Waa mid ka mid ah istaraatiijiyooyinka weerar ee joogtada ah ee ay isticmaalaan barnaamijyadaa si ay u helaan macluumaad aasaasi ah. Barnaamijyadu waxay hubiyaan marin kasta oo loo furo qaab dhismeedka iyaga oo ka gudbi kara weydiimaha SQL, taas oo ka baxsan hubinta amniga waxayna soo celisaa xogta aasaasiga ah.
Xiriirinta SSL waa isugeyn dhexdhexaadin ah oo isku xiran oo xiriir kasta oo xidhiidh la leh hal fadhiga SSL. Kulankan waxaa lagu tilmaami karaa xiriirka ka dhexeeya macmiilka iyo server, iyada oo ay weheliyaan qawaaniin farabadan oo ay ku xiran yihiin habka isgaadhsiinta.
Waxyaabaha ay haystaan ​​(calaamadda), Waxyaabaha ay yaqaanaan (furaha qarsoodi ah) iyo wax ay yihiin (biometrics). Xaqiijinta Tani waxay mararka qaar isticmaashaa eray qarsoodi ah iyo qalab qarsoodi ah, inkastoo xaqiiqda ah in munaasabaddu noqon karto PIN iyo suugaan.
White Box-Dhammaan xogta waxaa la siiyaa falanqeeyayaasha, macluumaadka Black Box-No waxaa la siiyaa falanqeeyayaasha, waxayna tijaabin karaan nidaamka xaaladdan la xaqiijin karo, Xogta Gray-Partial waxay la socotaa falanqeeyayaasha waxayna nasineysaa waxay u baahan yihiin inay si fudud u jiifsadaan.
Jilayaasha joogtada ah ee naqshadeynta websaydhku ka faa'iideysan karaan waa: Dhibaatooyinka aan fiicnayn, Qalabka caadiga ah, Bugsadaha nidaamka shaqada iyo server-yada.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ogaatid meesha burburka ku xiran ay dhaceen adoo tusaya silsiladda saxda ah ee isku xirka si aad u beddesho bartilmaameedkii ugu dambeeyay.
Saddexda marxaladood ee si loo hubiyo nidaam kasta: Hanti-Dhoweyn, Dhibaato, U-hoggaansanaan.
Su'aaluhu wuxuu kugula hadlaa erayga qarsoodiga ah, hase yeeshee wuxuu ku dadaalayaa inuu kugu soo kobciyo adiga oo isticmaalaya qayb weyn oo ereyga ah. Waa nooc ka mid ah nabadgelyada oo lagu kalsoon yahay oo loogu talagalay furaha ereyada iyo ereyga lagaa rabo inaad ogaato oo aad hesho.
SSL waxaa loo isticmaalaa si loo xiro xidhiidh ammaan ah oo ka dhexeeya PCs iyo macaamiisha. Qaadashada ka dib qaybta loo adeegsanayo qayb ka mid ah SSL: Nidaamka gacanta, Gacanta xisaabinta, SSL Diiwaangelinta Diiwaangelinta, Beddelka Nidaamka Cipher.
Dhiirrigelinta WEP waa farsamada loogu talagalay afduubidda nabadgelyada nidaamyada fog iyo kordhinta helitaanka aan la ansixin.
Xayeysiisyada muujinaya xaaladda gobolka SSL waa: Aqoonsi furan, istaraatejiyad isdabajoog ah, aqoonsi peer, Macallin Master, Cipher spec.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo loola tacaali karo amniga aaladaha Access Point: ma baahin SSID, isticmaalka WPA2 iyo isticmaalka cinwaanka MAC waa kuwa ugu muhiimsan iyaga.
Waxaa jira todoba waxyaalood oo ka mid ah Imtixaanka Amniga: Authentication, Confidentiality, Ruqsadda, Dulmiga, Dayaxa, Ka-reebista, Dib-u-qabashada.
Ports waa dhibicda meesha xogta oo dhan ayadoo la marayo nidaam kasta. Baadhitaanka dekedaha si aad u ogaatid furfurnaanta salka ah ee nidaamka waxaa loo yaqaan 'Port Scanning'.
Nidaam loo isticmaalo in lagu tirtiro shakhsiyaadka xogta adoo ku dayanaya dukumiinti wanaagsan sida Facebook ama Hotmail, si ay u soo qaadaan macmiilka inay galaan diiwaankooda iyo xogta qarsoodi ah. Khubarada ayaa lagu faray sida loo sameeyo macaamiisha iyaga oo xusuusinaya tan iyadoo ay ku jiraan fasalka waxbarashada ee internetka.
Waxaa loo adeegsadaa dhammaystirida baaritaanka dhamaystirka waxqabadka marxaladdaha hoose iyo weliba marka loo eego weerarada caanka ah. Haddii ay dhacdo in farqiga loo maro farqiga wareegga markaa maamuluhu waxa uu helayaa taxadar.
Nidaamyada loo isticmaalo in lagu sugo weerarrada webka ee websaydhka?
Maareynta Maareynta, rakibaadda nabadgelyo iyo qaabeynta software server-ka webka, daadgureynta koontada aan la isticmaalin iyo kuwa aan la isticmaalin, naafaynta ururada fog, iyo wixii la mid ah.
HIDS ama Nidaamka Dood-celinta Qayb-galka ah waa mid ka mid ah qeexidda nidaamka xaadirka ah ee la qaadayo iyo khalkhalka horay u soo maray. Waxay hubisaa haddii dukumiintiyada aasaasiga ah la beddelay ama tirtiray ka dibna digniin ayaa loo dirayaa maamulaha.
Shahaadooyinka Dhex-dhexaadinta - Su'aalaha iyo Jawaabaha Wareysiga